‘लभ स्टेशन’ छोडेकी निरुताले ‘दाल भात…’ के गर्लिन् ? « Ramailo छ
‘लभ स्टेशन’ छोडेकी निरुताले ‘दाल भात…’ के गर्लिन् ?
फिल्म ‘लभ स्टेशन’ मा अभिनेत्री निरुता सिंह नहुने भएकी छन् । फिल्मको छायाँकन चलिरहंदा निरुता फिल्ममा नहुने खबर बाहिरिएको हो । आखिर निरुता किन ‘लभ स्टेशन’बाट बाहिरिइन् त ?
आफ्नो बुबाको स्वास्थ स्थिति बिग्रिएपछि निरुताले ‘लभ स्टेशन’लाई समय दिन नसक्ने भएकी हुन् । उनका बुवा लामो समयदेखि मुम्बइको अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गर्दै गरेको ‘लभ स्टेशन’मा निरुताको जोडीको रुपमा ‘दर्पण छायाँ’ जोडी उत्तम प्रधान थिए । निरुताले फिल्म नखेल्ने भएपछि निर्माण टिम उत्तमको लागि नयाँ जोडी खोज्नतिर लागेको छ । फिल्मका हाल दार्जिलिंगमा छायांकन चलिरहेको छ । फिल्ममा प्रदीप खड्का र जसिता गुरुंग मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।
यस्तै मह जोडी र किरण केसीको ‘दाल भात तरकारी’मा पनि निरुता सिंह रहने या नरहने भन्ने दोधार बढेको छ । बुवाकै स्वास्थ्य अवस्था ठिक भए त निरुताले दाल भात तरकारी खेल्लिन् । नभए के गर्लिन् ? उनका बुवाको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना !